भोलि काम गरौं भन्ने मान्यताले गर्दा पनि विकसित देशको तुलनामा हामी निकै पछाडि परिरहेको अवस्था छ । विकासको खाका तयार हुन्छ, माइन्युट तयार हुन्छ, हरेक परिस्थितिमा सहकार्य हुन्छ, बजेट छुट्टिन्छ, तर यी सबै ढिलासुस्ती हुन्छ । काठमाडौंको तीनकुने–मीनभवन खण्डको पुल अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । काठमाडौँमा मोनोरेल आउने कुरा कहाँ पुग्यो ? कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा ठाउँ ठाउँमा आकाशे पुल कहिले निर्माण हुने ? सम्बन्धित निकाय के गर्दै छन् ? देशको दैनिक बढ्दो सवारी जाम नियन्त्रण कहिले हुने हो ? मेलम्ची खानेपानी आउने कुरा कहाँ पुग्यो ? सरकारको मातहतमा रहेका ठूला विकासका योजनाहरू के हुँदै छन् ?
हो, अब यी सबै भोलिवादमै सीमित हुने देखिन्छ । काम हुन्छ कछुवा गतिमा, विकासका बोलीहरू निस्कन्छन्, तीव्र गतिमा । कसको कुरा सुन्ने, कसको नसुन्ने, विकासको बजेट आउँछ, भागबन्डामा कुरा मिल्दैन, विकास योजनाका काम ठेकेदार कम्पनीलाई दिन्छन्, समयमा काम सकिँदैन ।
छुट्टिएको बजेट कार्यान्वयन नहुँदा त्यसै फ्रिज भएका समचारमा सुनिन्छ । हामीले अब देश स्वीजरल्यान्ड भएको कहिले देख्ने ? मुलुक विकास–निर्माणले भरिपूर्ण भएको कहिले देख्ने ? देश आर्थिक समृद्धिले भरिपूर्ण कहिले हुने ? यी सबै भनेको भोलि गरौं भन्ने मान्यता र भोलिवादले गर्दा हुने सिर्जित परिणाम हो । भोलि काम गरौं भन्ने मान्यताले गर्दा पनि आज देशका विभिन्न क्षत्र जस्तै बैंक, वित्तीय संस्था, कर्पोरेट संस्था, विभिन्न कार्य स्थानमा रहेका सस्थाहरू, सरकारको मातहतमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालगायत धेरै ठाउँमा आज नभए भोलि गरौं भन्ने परिपाटी चल्छ ।
भोलि गरांै भन्ने बानी बस्छ । हुँदा–हँुदा भोलि नभए पर्सि गरौं भन्ने मान्यताले गर्दा पनि आज मुलुकको अवस्था यस्तो छ । त्यसैले तपाईं–हामी सबै जना कुनै पनि सानो या ठूलो काम होस्, आजै गरांै भन्ने मान्यतामा दृढ हुनु जरुरी देखिन्छ । आजको परिवर्तन नै भोलिको भविष्य होव भोलिको समृद्धि हो अनि विकास पनि हो । समयको नाश, काम अपुरो, चौतर्फी दबाब, अर्थतन्त्रमा ह्रासलगायत कैयौं बाधा–अड्चनहरू सिर्जना हुन्छन् ।
त्यसैले कहिल्यै कामलाई भोलिका लागि साँच्नु हँुदैन । सकेको काम सोही समयमै सक्नुपर्छ । नसकेको काम तत्कालका लागि सक्नुपर्छ भनी दृढ विश्वास र संकल्प राख्नुपर्छ । भोलि भनेर कहिल्यै साँच्नु हुँदैन । त्यसैले आजै गरौँ, अहिले नै गरौं, नसकेको काम सक्ने प्रयत्न गरौं, भोलि हुने काम आजै सकौं भन्ने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ ।
स्थानीय तवरमा अहिके तीव्र रूपमा विकासका कामहरू भइरहेको अवस्था छ । यसमा तपाईं–हामी सबै मिली जनप्रतिनिधिहरूलाई साथ अनि सहयोग गर्नु जरुरी छ भने सरकारले ल्याएको विकासको काममा पनि कसैले विरोध नगरी स्वागतयोग्य तरिकाले सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग, सल्लाह गर्नुपर्छ । विकासको विरोध गर्ने देशमा धेरै छरिएर बसेका असन्तुष्टिहरू होलान्, ती सबैलाई चित्त बुझाई आजै कामप्रति लाग्नु तपाईं–हामी सबैको कर्तव्य हो ।
देशभित्र छरिएर रहेका विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी वा गैरसरकारी सस्थाको तह र तप्कामा बसेर काम गर्ने कर्मजीवीहरू जसले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ भने त्यस्ता कर्मजीवीहरू पनि छन् जो आजै हुने काम भोलि, पर्सि हुँदै महिनौं दिनसम्म पनि काम नगरी बस्ने अनि समयमा काम नसकी विकास–निर्माणमा बाधा उत्पन्न गराउने कर्मजीवीहरूलाई सरकारका तर्फबाट पनि निगरानी गरी कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ । आजको काम आज गरौँ, भोलि गर्छु भन्ने परिपाटीको अन्त्य गरौं । समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा तपाईं-हामी हातेमालो गरी अघि बढौं ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवस्था
मुक्तिनाथ दर्शनको यात्रा
चिनियाँ सामानमा ट्रम्पको शुल्क वृद्धिको अर्थ